Nam Prik Pla Sauce ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Nam Prik Pla Sauce
ဒီဆော့စ်ကို အသီးအရွက်ကြော်တွေ၊ တန်ပူရာကြော်မျိုး စတာတွေနဲ.အဓိကတွဲစားလေ့ရှိတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဆော့စ်ပါ။
ငရုတ်သီးစိမ်း( အစိမ်း +အနီ )..............၁၀ တောင့်ခန်.
ကြက်သွန်ဖြူ................................... ၃-၄ တက်ခန်.
ငရုတ်သီးစိမ်းတွေကိုမထူမပါးလေးလှီးသလို ၊ကြက်သွန်ဖြူ ၊ သံပုရာသီးခြမ်း
ငါးငံပြာရည် ၊ သံပုရာရည် ၊သကြား စတာတွေကိုပျော်ဝင်အောင်မွှေပြီး..